Fambolena sy fiompiana ary jono - EDBM - Economic Development Board of Madagascar
EDBM Fambolena sy fiompiana ary jono
Madagasikara, sompitry ny Ranomasimbe Indiana
Madagasikara: firenena manankarena olona, harena voajanahary ary tsara toerana ara-jeostratejika no toerana idealy hanaovana izay karazan- tetikasa rehetra miompana amin’ny fihariana ara-pambolena eto amin’ny Ranomasimbe Indiana.
Maherin’ny roatokon’ny Malagasy no miaina any ambanivohitra sady ahazoana mpiasa maro efa mahay tsara ny tokony atao fa efa nentim-paharazana amin-dry zareo ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Raha atao salanisa ankapobeny manerana ny firenena, mihoatra ny atsasany amin’ireo tantsaha ireo mety hahefa ny asa.
Amin’ny velarantany mitotaly 60 tapitrisa ha ananan’ny Nosy, saika ny atsasa-manila amin’izany no azo ambolena ary mbola azo trandrahana ny 18 tapitrisa ha. Hadadasika mihoatra lavitra noho ny fitambaran-tany rehetra amin’ireo nosy hafa rehetra aty amin’ny Ranomasimbe Indiana. Mifanila toerana ny Karazam-bokatra avy amin’ny toe-tany trôpikaly sy antonony noho ny fisian’ny karazan-toetrandro eto amin’ny «Nosy Kaontinanta» sy ny fisian’ny loharano azo tarihina sy hamokarana angovo (renirano 2.000 km). Amin’zao fotoana izao, mamokatra ireto manaraka ireto i Madagasikara:
Vary eo ho eo amin’ny 3,6 tapitrisa taonina: mihoatra noho ireo firenena ambiny ao anatin’ny SADC ary voasokajy ho mpamokatra larahana faha- 3 eto Afrika. Ampiharina manerantany ankehitriny ny teknika malagasy mahomby.
Koba sy sakafo be tavolo hafa mihoatra ny 1 tapitrisa taonina: katsaka, ovy, mangahazo, voamaina ;
Voankazo sy legioma ahitana fahamaroan-karazana indrindra eto ambonin’ny tany : manomboka amin’ireo karazan-tsaramaso avy amin’ny toetrandro antonony, mandalo ny paoma sy ny poara sy ireo voankazo manana voany madinika avy amin’ny toetrandro mafana ka hatramin’ireo karazan-tsakay;
Ny Lodsia izay misahana ny 70%-n’ny tsena ao Eoropa : mpanondrana voalohany manerantany an’ity karazana voankazo ity;
50%-n’ny lavanila manerantany : mpanondrana voalohany manerantany an’ireo tsiron-tsakafo sy menaka manitra hafa (huiles essentielles)
Kafe, dite sy kakaô ambony kalitao.
Omby 8 tapitrisa mamokatra ronono eo amin’ny 400 l isan-taona, ondry, osy sy kisoa maherin’ny 3 tapitrisa ary vorona 30 tapitrisa mahatonga an’i Madagasikara ho iray amin’ny firenena Afrikana manana andiam-biby fiompy lehibe indrindra. Ny fahaiza-manaony manokana amin’ny fikarakarana ny henan’ny ganagana/aty matavy sy hena tsy mahazatra (aotirisy, voay), fanta-daza manerantany ny famokarana tantely sy ny karazam-bokatra hafa avy amin’ny fiompiana tantely.
Amin’ny maha nosy an’i Madagasikara, manana otrikarena lehibe amin’ny jono sy ny fiompiana hazandrano izy:
ZEE (Faritra Ara-toekarena manokana) mandrakotra 115 tapitrisa ha sy lembalemba kaontinantaly midadasika eo ho eo amin’ny 12 tapitrisa ha izay manankarena hazandrano;
Morontsiraka mirefy 5.600 km, ala honko maherin’ny 300.000 ha ka honahonan-dranomasina voahodidin-tany ny 50.000 ha amin’izany ary azo hajariana hanaovana fambolena makamba ny 30.000 ha ;
Drafi-drano voajanahary 160.000 ha mety hiompiana trondro an-dobo na fefena, tanimbary 150.000 ha tarihan-drano ka ny 34.000 ha mety tsara hampiarahana fambolem-bary sy fiompiana trondro ary velarandrano 20.000 ha ampy rano mety hajariana ho kamory ;
Otrikarena eo amin’ny sehatry ny haijono sy ny fiompiana hazandrano maherin’ny 500.000 taonina isan-taona ka 60% tombombarotra ;
Hita eto Madagasikara ny 50% mihoatra amin’ny Ahidrano ilain’olombelona.
Miorina ao amin’ny fihaonan-dalan’i Afrika sy i Azia ary tsy lavitry ny firenena Afovoany-Atsinanana sy Eoropa i Madagasikara ka ho mety ho lasa sompitra tokoa eto amin’ny Ranomasimbe Indiana noho ny fampivelarana ny fotodrafitrasa indrindra fa eo amin’ny sehatry ny seranana.
Lasitra araka ny lalàna
Lalàna laharana faha-2007-037 tamin’ny 14 Janoary 2008 miompana amin’ny Orinasa Afakaba eto Madagasikara
Fanondranana 95% farafahakeliny amin’ny vokatra
Tsy mandoa IR (Hetra amin’ny vola azo)
15 taona voalohany ho an’ny orinasa afa-kaba, avy eo mandoa 10%
5 taona voalohany ho an’ny orinasa momba ny fanodinana, avy eo mandoa 10%
2 taona ho an’ny orinasa mpanao tolodraharaha, avy eo mandoa 10%
Tsy mandoa fadintseranana sy TVA amin’ny fanafarana entana
Adiresy mailaka (tsy maintsy fenoina)